Tamin’izany no nilazana fa « novonoina ity minisitra ity fa tsy maty noho ny lozam-pifamoivoizana an-dranomasina araka ny voalaza ».
Nanome toky izy ireo fa afaka andro vitsy dia havoaka ho fantatry ny besinimaro ny valin’ny famotorana nataon’izy ireo.
« Miantso ilay komity manokana mba hisahana ny fanadihadiana iny raharaha tany Soanierana Ivongo iny izahay, mba hamoaka haingana ny valin’ny famotoran’izy ireo ihany koa. Raha ny tokony ho izy, ka nanao ny asany tsara io komity io dia tokony hitovy ny valin’ny famotorana nataonay roa tonta. Manana porofo izahay ilazana fa novonoina ny minisitra Nadine Ramaroson.
Ampahafantarinay ny rehetra tsy ho ela io porofo io, raha toa ka tsy mamoaka ny valin’ny famotorana nataony io komity najoron’ny fanjakana io », hoy i Alain Ramaroson, dadatoan’ny minisitra namoy ny ainy.
Niantso ny fanjakana ihany koa ity mpikambana ao amin’ny Filankevitra ambonin’ny tetezamita ity mba handray andraikitra mikasika ilay mpanamory ilay sambo sy ny mpanampy azy, izay tsy manana fahazoan-dalana hitatitra olona mankany Soanierana Ivongo, fa manodidina an’i Sainte Marie ihany. « Fa maninona ny mpamily taksibe raha mahafaty olona no ampidirina am-pinja avy hatrany kanefa tsy tahaka izay no nahazo ny mpamily ilay sambo », hoy ny fanontaniana napetrak’i Alain Ramaroson.